Ukufakwa amapuleti ethusi okugqamile ukuhlanganisa izihlanganisi ngamapuleti ethusi
Ikhaya / Izicelo / Induction Brazing / ukuqinisa izingqimba zethusi ukunamathisela amalunga
ukuhlangana kwamapuleti ethusi okugqagqene
Categories: Izicelo, Induction Brazing, Umshini wokushisa wokufakelwa Tags: amapuleti ethusi ethengiswayo, amalunga ethusi, amapuleti ethusi abilayo, nezingcwecwe zethusi zokunyathelisa, ukuhlangana kwamapuleti ethusi, inductino brazing amapuleti amapuleti, lokungeniswa zethusi amapuleti brazing, lokungeniswa ukujoyina amapuleti zethusi, umshini wamapuleti we-inducton brazing, RF zethusi amapuleti lokungeniswa
Inhloso yokuhlolwa kwesicelo ukushisa amapuleti ethusi kanye nethusi ukunameka ukuhlangana nokungeniswa ukuze kufakwe esikhundleni sethoshi. Ukuhlangana kwe-Overylay kungaba ngethusi noma ithusi ithusi.
Inqubo yamanje yokubopha ithoshi iholela ekungcoleni okwedlulele emhlanganweni futhi idinga ukuphinda kubuye kwenziwe umsebenzi omkhulu ngemuva kokuhlinzwa.
I-DW-HF-25kw umshini wokufudumeza lokungeniswa
• Amapuleti wesigqebhezana nethusi
• I-Braze alloy - EZ Flo 45
Amapharamitha wokhiye - amapuleti weCopper
Ukushisa Okushisa: Cishe u-1350 ° F (732 ° C)
Isikhathi: Isikhathi esimaphakathi - imizuzu emi-2
I-EZ Flo 45 yocingo lokuxhuma yanqunywa yaba ngu-2 ”(50.8mm) ubude futhi yafakwa endaweni yesixhumi esibonakalayo.
Imihlangano yasungulwa (bheka izithombe) futhi yavutha Ukushisa ukufakelwa ngokwesilinganiso semizuzu emi-2 ukugeleza i-alloy kanye nokufeza ukufiphala.
Ama-Parameter Key - amapuleti weCopper Brass coupon
Ukushisa ukushisa: Cishe u-1350 ° F (732 ° C)
Imihlangano yasungulwa (bheka izithombe) futhi yavutha isikhathi esimaphakathi semizuzu emi-2 ukugeleza izilo nokufeza Ukukhishwa kwesibalo.
Ama-Brazing Diamond Amathuluzi Nge-Induction